Alibaba inoburitsa yakavhurwa sosi yayo Dragonwell 8.0 tsika JDK | Linux Vakapindwa muropa
Kuti udzivise matambudziko epamutemo neOracle (iyo inove neyedzimba yekuwedzera), camakambani mazhinji uye akawanda ari kuvaka yavo yavo JDK kubva kuOpenJDK uye zvinobatsira nharaunda nebasa ravo.
Ive iri Red Hat, Amazon pakati pevamwe, kutumidza mashomaEse makambani aya ane maJDK avo. Sekureva kwavo, ekuwedzera kweOracle kunoparadza kuvimba kwevagadziri vari kufamba zvishoma nezvishoma kubva pamutauro weJava.
2 About Alibaba Dragonwell 8.0 Nyowani Shanduro
2.1 Ungawana sei Alibaba Dragonwell 8.0?
Java mutauro unoshandiswa zvakanyanya paAlibaba sezvo yaida yakagadzirirwa JDK kune ayo mashandisiro e-commerce, mari, uye online logistics masevhisi anomhanya pane anopfuura zviuru zana zvemaseva.
Kubva pane ichi chinodiwa kwakamuka Alibaba Dragonwell, JDK yakatorwa kubva kuOpenJDK uye ndiyo injini inomhanya neAlibaba yakagoverwa zvikumbiro zveJava pachikero chakanyanyisa, zvinoenderana nemitemo yekambani.
Seforogo yeOpenJDK, Alibaba Dragonwell JDK iri yemahara software pasi peGNU 2.0 rezinesi, inowanikwa paGitHub.
Alibaba Group mainjiniya achangobva kuunzwa yako wega JDK kuitisa paGitHub. Kune iyo kambani, kumisikidza uku kwakazvarwa kunze kwekudikanwa kwekutsvaga dhairekitori yeJava iyo inokodzera kwazvo kune ayo mashandisirwo uye inogonesa ayo makuru-makuru kuita.
Iyi yemukati yekugadzirisa kana yekudzika vhezheni yeOpenJDK kubva kuAlibaba Group yakatumidzwa zita Alibaba Dragonwell 8.0. Sezvinotarisirwa, uku kugadzirisa kwave kuitiswa kune mamwe mabhizinesi anodikanwa.
Pamusangano weDragwell timu:
Izvo zvinoonekwa kuti iyo yekupedzisira yakagadziridzwa pamhepo e-commerce, mari uye logistics kunyorera uye yatove kushanda pane anopfuura zana zana remaseva. »
Alibaba Dragonwell ndiyo injini inoendesa zvikumbiro zvedu zveJava zvine hunyope hwakanyanya, "rakadaro timu.
Iyo Alibaba Dragonwell timu inoshuma kuti iyo yekupedzisira inosimbiswa seinowirirana neiyo Java SE standard uye kuti yazvino vhezheni inongowirirana chete neLinux chikuva che x86 uye x64 zvivakwa.
Kunze kwekunge iri forogo yeOpenJDK, ine zvimwe zvinhu izvo kambani inoona zvakakosha kwazvo pabasa rayo.
"Nekutora OpenJDK kumhanyisa mashandisiro edu, takaona kudiwa kwekuzvigadzirisa zvakananga kune makuru-ese Java application deployment," rakanyora timu.
About Alibaba Dragonwell 8.0 Nyowani Shanduro
Iyo itsva vhezheni yeAlibaba Dragonwell ine mutori mutsva wemarara anonzi CMS, ndege yekurekodha (JFR) uye inounza matsva ekuwedzera.
Pamushumo wekuburitswa uku kubva kuna Alibaba Dragonwell, timu yekusimudzira inosimbisa kuti:
Iyo nyowani mini-sarudzo inowedzerwa kune dump subcommand yeiyo dump turu yekuregeredza zvirimo zvemhando yekutanga arrays ye heapdump.
Zvakare pamwe nesarudzo nyowani DhindaYoungGenHistoAfterParNewGC kuprinta iyo histogram yezvinhu mushure meParNew GC.
Iyo PrintGCRootsTraceTime sarudzo yakawedzerwa kuprinta iyo ParNew GC ruzivo seG1GC. Batsira vashandisi kuti vawane dambudziko renguva refu yekuzorora. Inogona kuvhurwa / kuvharwa naJinfo
Uye nyowani ArrayAllocationWarningSize sarudzo yekudhinda iyo stack stack yeakarongeka mepu inodarika ArrayAllocationWarningSize. Iko kukosha kwekusarudzika kwesarudzo iyi i512M. Izvi zvinogona kuchinjwa naJinfo.
Ungawana sei Alibaba Dragonwell 8.0?
Iyi JDK inowanikwa kune avo vanofarira vanoda kuziva zvishoma nezvayo kana kuitisa pane avo maseva.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo Alibaba Dragonwell JDK inongotsigira chete Linux chikuva pane x86 uye x64 zvivakwa parizvino.
YeRHEL, CentOS uye AliOS masisitimu anogona kuwedzerwa inotevera repositi.
Muchiitiko cheCentOS izvi tinozviwedzera ne:
Zvino zvakapusa kugonesa Alibaba Dragonwell JDK yekushandisa kwako, kweNdokumbirawo mugadzirise Java_HOME kunongedza kuAlibaba Dragonwell yekuisa dhairekitori.
Kune mamwe masisitimu unofanirwa kutora iyo JDK kubva kuGithub, chinongedzo ichi.
Unogona kubvunza iyo Alibaba Dragonwell 8.0 yekumisikidza mirairo pamwe neruzivo rwakawanda nezvazvo. Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Alibaba inoburitsa yakavhurwa sosi yayo Dragonwell 8.0 tsika JDK
3 yakasarudzika yakavhurwa sosi maapplication eMac